သံစဉ်မဲ့ အလင်္ကာများ: အိတ်
စာရေးသူ--> တပြည်သူ အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 11:03 PM
ကွေးကွေးကောက်ကောက် ပြောင်ပြောင်လက်လက်နဲ့ကပ်ကြေးလို လို ဟာက ဘာကြီးတုန်းဗျ...
အစ်မ...ခဲတံလို ဟာမျိုးအောက်က အရောင်လက်လက်နဲ့ ဝိုင်းဝိုင်းလေး တစ်ခုလောက်ရ ဘယ်လောက်ကောင်း ရွာပြန်ပြီး လယ်ပြန်လုပ်ဖို့ အရင်းတော့ရမှာပဲ ...
မလေး.. အိတ်အမဲလည်း ဖွင့်ပြလေ. ဘာလည်း ပိုက်ပိုက်ချီးမှာကြောက်လို့လား.. :P
ဦးမိုးထက်နေကြီးက ရယ်ရတယ်၊ သူပြောလို့ရှာလိုက်ရတာ မလေးရဲ့ သော့တွဲကြီးပြောတာထင်တယ်။ မလေးရဲ့ လိုးရှင်းလေးပဲ လူးထားတဲ့ အေးမြမြ ကြည်စင်မျက်နှာ မြင်ချင်ပါဘိတော့တယ် မလေး...
ကွေးကွေးကောက် ကောက် ပြောင်လက်နေတဲ့ ကတ်ကြေးနဲ့တူတာက ဘာကြီးလဲတဲ့ မလေးရေ ၊မလေး ရှက်မှာစိုးလို့ လေပြေ ဖြေပေးလိုက်မယ်နော်၊ အဲဒါကြီးကတော့မိန်းခလေးတွေရဲ့ လှပမှုလှို့ဝှက်ထဲက တခုဖြစ်တဲ့ မျက်တောင် ကော့တဲ့စက်ကလေးပါပဲရှင်၊ မလေးရေ ဟုတ်လား၊
ချစ်သော မလေးက လိုးရှင်းပဲ လိမ်းထားလည်း မဟာဆန်ဆန် လှနေမှာလို့ ယုံကြည်ပါတယ် ။ အာဘွားးးးးးး
ဒါနဲ့ curler အမြဲသုံးလို့ ထင်တယ် ။ မျက်တောင်လေးတွေ ကော့နေတာပဲဗျို့အဟဲ ကြေငြာဝင်ပေးသွားတယ်း)
အဟီး မလေးက စကားပြောလည်း ရိုးရိုးလေး အိတ်ကိုင်တော့လည်း ရိုးရိုးလေး .. အင်း ပြီးတော့ .................... ရိုးရိုးလေး
မလေးရဲ့ ပစ္စည်လေးတွေထဲမှာ စိတ်ဝင်စားစရာ အကောင်းဆုံးကတော့ Highlighter လေးပါပဲ.
အဲဒီ့ပစ္စည်လေးကို တော်တော်သုံးသလို အသုံးလည်း တော်တော်ဝင်မယ့်ပုံလို့ ထင်ပါတယ်. ဘေးက ဆေးသားလေးတွေတောင် ပွန်းနေပြီနော်.
ကျန်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေက မိန်းကလေးတစ်ယောက်မှာ ရှိတတ်တဲ့ ပစ္စည်းလေးတွေမို့ ဘာမှ ပြောစရာသိပ်မရှိပါဘူး (ဟို ကတ်ကြေးကြီးက လွဲလို့ပေါ့. ဟတ်ဟတ်ဟတ်)
(၁) Mp3 Player မတွေ့ရဘူး
(၃) Safety Pin မတွေ့ရဘူး
မလေးအိတ်ကရှင်းနေတာပဲ။ ကျနော်အိတ်ဆိုရင်စုံပလုံစိနေတာပဲ။ လိုတရအိတ်ကြီးလေ... ဟိ ဟိ
မအိမ့်လည်း lip gross ကြိုက်တယ် ..း)
အိနဲ့တူတယ် .. ကလစ် ပိစိလေးတွေရှိတာရော .. =)
အိတ်ထဲက ကဒ်ကို ပြတဲ့နေရာမှာ တပြည်သူနဲ့ ကျနော် အကြံခြင်း တူတာ တခုရှိပါတယ်။ :D